Anodiwa Anotambudza Mutengi | Martech Zone
Chishanu, December 14, 2007 Muvhuro, September 24, 2012 Douglas Karr
Ndine chokwadi chekuti munhu wese ane imwe yemhando idzi dzevatengi. Ini ndakakomborerwa chaizvo pamusoro pemakore gumi apfuura ayo ndanga ndiine vatengi vakanyatsonakidzwa nekushanda neni. Ndakaona mabatiro anoita mamwe makambani vatengi uye ini ndinozvivenga. Ndakagara ndakanangana nedanho repamusoro rebasa. Ini ndanyanyisa-kuvimbisa uye kuwedzeredza-kununurwa. Asi, geesh… iye mumwe mutengi… dai ndaigona kungovanyorera tsamba chete…
Anodiwa Anotambudza Mutengi,
Kudzoka pawakatisarudza isu sevatengesi vako, iwe wakabvunza mibvunzo yakawanda uye ukatidhonza zvisina tsitsi kuburikidza nemakiromita ered tape pamberi iwe takafunga kuti isu tiri chigadzirwa chakakodzera iwe. Ikozvino zvawatisarudza isu, haisi mhosva yedu kuti ikozvino hauna kufara nezvakanyanya maficha uye mashandiro atakakuratidza uye iwe wawakada. Hatina kunyepa. Hatina kureva zvisizvo. Iwe ndiwe wakachinja mafungiro ako.
Ticharamba tichidada nenyaya yekuti takasangana ne100% ye dzako zvinodiwa uye zvakapfuura zvese zve dzako nguva dzakatarwa. Ndicho chivimbiso chatakaita kwauri uye tikachichengeta.
Kunyangwe zvaunogona kutenda, tarisiro yedu haisi yekuparadza bhizinesi rako. Chinangwa chedu ndechekuenderera mberi nekuvandudza mhinduro dzakakura kwazvo pasi rino. Isu tinoziva kuti tinopfuura vamwe vese vatengesi mune maficha, kuenderana, kushandisika, uye isu tine mamwe maratidziro ezvakaitika kupfuura chero imwe kambani.
Nepo vatinokwikwidza vasingape email yavo kana nhamba dzenhare kwauri, isu tazivisa mumwe nemumwe wevashandi vedu kwauri iwe, tikakupa ruzivo rwedu rwakazara, uye uine 24/7 rutsigiro rwemunhu. Icho chinangwa cheichi hachisi chekupa svikiro kuti iwe utideredze isu, zviripo nekuti isu tine hanya newe, yako kambani, uye vatengi vako.
Mutengi wese ndiye wedu # 1 wekutanga. Kunyangwe izvo zvingangotaridza kunge zvisingagamuchirike kana urikushandisa imwe mari nesu, unozvifarira kana vamwe vari kushandisa yakawanda, yakawanda mari yakawanda nesu.
Isu tiri kugara tichiongorora zvinoitika muindastiri, hunyanzvi, uye hwaro hwevatengi saka haufanire kudaro. Izvi zvinotipa isu zvine chiratidzo chekuona uye zvigadzirwa backlogs zveficha uye kugadzirisa izvo zvinopfuura zvakanaka kupfuura rinotevera gore. Kupesana nekutenda kwakakurumbira, isu hatisi kugara pasofa tichiridza World of Warcraft uye takamirira chichemo chinotevera. Tiri kushanda, isu tiri kuisa mari, uye isu tiri kugadzira zvigadziriso zuva rega rega. Tine purogiramu yedu yebasa iri munzvimbo. Zvako zvido zvekuburitswa kwechinhu chitsva zvine mhedzisiro pane izvo zvirongwa zvatiri kutoshanda pazviri uye zvinangwa zvatiinazvo. Ziva kuti tichaita nepatinogona napo kuisa zvaunoda pamberi pevamwe - asi zvinotora nguva kugadzirisa zvirongwa, zvinangwa uye zvinotarisirwa nemunhu wese musangano redu.
Kuchemera kuti chinhu chiitwe nezuro hakuvandudze hunhu kana kuvimbika kwechinhu ichocho. Tine maitiro, kuyedza, uye kuvimbiswa kwemhando panzvimbo yako kuchengetedzwa, kwete yedu.
Kana, nguva dzese dzatinokudana, chinangwa chako chete kutituka nekutideredza - hatisi kuzoita nzira yedu yekukufonera uye kukubatsira kunatsiridza mhedzisiro yako yebhizinesi. Hatigone kudzidza kubva kwauri kana ukasatipa mukana. Ticharega kubuda munzira yedu kuti tikubatsire nekuti isu tine hanya nevashandi vedu zvakakwana zvekuti hatidi kuvaona vachishungurudzwa. Tinoda kushandisa nguva yedu nevatengi vanoziva hunyanzvi hwavakaisa mairi uye vanoshuvira kushanda pamwe nesu chinangwa chimwe chete.
Bhizinesi redu harisi kukura kakapetwa kagumi gore pamusoro pegore nekuti isu hatina ruzivo uye hatinzwisise zvatiri kuita. Tiri kuchinja indasitiri uye kuzivikanwa nezvayo. Shanduko inoda kuda, zviwanikwa uye nguva. Iva nemoyo murefu nesu uye hauzombozvidemba. Vatengi vedu vanogona kushanda nesu kana ivo vanogona kutirwisa, ndiani waunofunga kuti achabatsira zvakanyanya?
Kuchengeta vashandi vako vachifara kwave kuchiratidzwa kunatsiridza kuvimbika kwavo uye negoho. Iwe unofunga zvakatosiyana neako mushambadzi wekushandisa?
Mutengesi Waive Wakangwara Zvakaringana Kusarudza
Tags: APIapifierkunyorera programming interfaceb2cgamificationjsonmukurumbira manejimendizororosipokupatsanurwa kuedzayokuedzwamushandisi pfungwa pfungwawordpress iphoneWordpress iphone appXML
Kugara Simba: Uchagara kwenguva yakareba sei?
Zvita 15, 2007 na7:28 PM
Ndozvifarira. Ini ndaizodzokorora ndima mbiri dzekutanga seizvi:
"Kare pawakatisarudza semutengesi wako, iwe wakabvunza mibvunzo yakawanda uye wakatizvuzvurudza zvisina tsitsi kuburikidza nemakiromita ered tepi, wakatiita kuti tinyore zvakadzama mabasa edu uye kwete kusvika iwe uine chirevo chakakwana chebasa rawakabvuma kuita. unosarudza kuti isu taive mhinduro chaiyo kwauri.
Zvino zvawatisarudza, haisi mhosva yedu kuti matambudziko ebhizinesi rako achinja uye hausi kufara nemaitiro nemasevhisi atakabvumirana kuti achagadzirisa matambudziko sekutsanangura kwawakaita ipapo. Hatina kunyepa. Hatina kutaura zvisizvo. Mamiriro ako ezvinhu nemhoteredzo zvakachinja.
Iye zvino isu sechikwata tinofanirwa kuungana uye tinofanirwa kutarisa
nzira yekukurumidza kugadzira mhinduro inoshanda kune yakagadziridzwa matambudziko ebhizinesi ………………………
Zvita 15, 2007 na9:05 PM
Ndinofara kuti wakatumira iyo PG-13 vhezheni. haha. Ndinoda kutumira gumi nemaviri eizvi kune vamwe vatengi. Izvi zviri pasi perezinesi rekugadzira commons here? Chinyorwa chikuru.
Gosh, zvese zvinoita sechokwadi. Kuda kunge iwe uchangorarama kuburikidza neiyo foni yekudzokorora… '-)
Iwo maemail ari kunze kwechati zvakare! 🙂
Ehe, ndaiva nevamwe vatengi vaisafara pandakawedzera traffic yavo nekutengesa…
Zvisiire kuna Ade kuti aise izvi mune yakapfava, ine hunyanzvi chunk yekodhi pa Pseudocoded!